Cities XL 2012 ~ The ICT.com.mm Blog
Home » Review » Gaming »
Posted by	 Yahtar
ဂိမ်းတွေ အများအပြား ရှိသလို ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲ့လို ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေထဲကမှ တစ်ချို့လဲ action ဂိမ်းတွေကို ကြိုက်သလို တစ်ချို့လဲ adventure ဂိမ်းတွေမှ ဆော့ချင်ကြတဲ့ သူတွေလဲ ရှိတာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းတော့ ဘယ်တူပါ့မလဲ။ ကျွန်တော် ပြောမဲ့ ဂိမ်းကို ဆော့ကြည့်လိုက်ပါ။ ဂိမ်းဆော့တဲ့လူ အများစု ကြိုက်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်ချင်တဲ့ ဂိမ်းသမားတွေဆိုရင်တော့ ကွက်စတိပါဘဲ။ ကျွန်တော်လဲ ဒီဂိမ်းလေးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဆော့နေရင်း ကိုယ်ပိုင်မြို့လေးတစ်ခု ပိုင်သွားသလိုတောင် ခံစားရတယ်ဗျ။ ထွက်ထားတော့ ကြာပါပြီ 2011 တုန်းက ထွက်ထားတာ။ ဒါပေမဲ့ ကစားရတာ ကောင်းလိုိ့ review ပြန်ပြောတာပါ။ ဂိမ်းရဲ့ နာမည်က Cities XL 2012 ပါ။ Publisher Focus Home Interactiveနဲ့ Developer Monte Cristoတို့ ဖန်တီးထားကြတာပါ။ ဂိမ်းအမျိုးအစားက Simulation ဂိမ်းအမျိုးအစားပါ။ Simulation ဆိုတဲ့အတိုင်း တကယ် အစစ်အမှန်လို ပြုလုပ်ထားတဲ့ အတုအယောင် တစ်ခုပေါ့။ တကယ့်မြို့ တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေရတဲ့ ပုံစံမျိုး ဂိမ်းထဲမှာ ကစားရမှာပါ။ ဒီဂိမ်းကို ကစားမဲ့သူဟာ မြို့တော်၀န် တစ်ယောက် ဖြစ်သွားသလို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လိုလဲ ကစားရမှာပါ။
ကစားနေတဲ့ သူက မြို့ တစ်မြို့ကို တည်ဆောက်နေရတဲ့ သူဆိုတော့ ကိုယ့်မြို့ကို လူတွေ လာနေအောင် အိမ်တွေ ဆောက်ပေးရမယ်၊ ဆေးရုံတွေ၊ ရုံးတွေ၊ စက်ရုံတွေ စတဲ့ မြို့တစ်မြို့မှာ ရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတွေကို တည်ဆောက်ပေးရမှာပါ။ မြို့အင်္ဂါရပ်နဲ့ ညီမှ ကိုယ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ မြို့ကို လာနေတဲ့ သူတွေရော စီးပွားရေး လုပ်တဲ့ သူတွေရောပါ စိတ်၀င်စားမှာပါ။ ဂိမ်းကို စ ဆော့တဲ့အခါ ဆော့ရတာ ပျင်းစရာ ကောင်းသလို ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတွေမှာ ပိုပြီး စိတ်၀င်စားစရာ ကောင်းလာပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ ပေးထားတဲ့ မြို့တမြို့ကို ရွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ရွေးလိုက် တဲ့မြို့က ဘာမှမရှိသေးတဲ့ မြေပြင်ကြီးဘဲဆိုတော့ ပထမဆုံး ကားလမ်းတွေဖေါက်ပေးရမယ်။ ကားလမ်းဖေါက်တဲ့ နေရာမှာတစ်ခု သတိထားရမယ်ဗျ။ ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ မြို့ရဲ့ အစွန်ဆုံးတွေကနေ ကားလမ်းကို စဖေါက်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှလဲ တစ်ခြားမြို့က လူတွေ လာနိုင်မှာကိုး။ အဲ့ဒီ လမ်းက မြို့အ၀င် လမ်းပေါ့။ လမ်းဖေါက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ ရပ်ကွက်တွေ၊ ဈေးတွေ၊ စက်ရုံတွေ ဆောက်ပေးရတော့မှာပါ။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ့်မြို့ကို ကိုယ်ကြိုက်သလို designဆွဲ စိတ်ကြိုက်Planတွေ ချပေးလို့ ရပါပြီ။ မြို့ကို တည်ဆောက်ဖို့ ပိုက်ဆံလဲ ရှာရဦးမှာပါ။ မြို့ တစ်မြို့ရဲ့ လိုအပ်တာတွေ အကုန်လုံးကို စီစဉ်နေရတာဆိုတော့ အုန်းတော့ နည်းနည်း စားမယ်ဗျ။ ဒီဂိမ်းက ဘာမှသာ မဟုတ်တာ graphic ကောင်းတယ်ဗျ။ သူက 2D ရော 3Dပုံစံမျိုးကိုပါ support လုပ်ပေးနေရတာဆိုတော့ graphicတော့ တောင်းတယ်။
Cities XL 2012က ထွက်ပြီးသား Cities XL 2011ကို ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Cities XL 2011ထက် မြို့အသစ်တွေ ပါလာမယ်၊ game tools အသစ်တွေ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ မြို့တည်ဆောက်တာ ပြီးသွားရင်လဲ ကိုယ့်မြို့နဲ့ တစ်ခြား မြို့တွေပါ ကုန်သွယ်ရေးတွေလဲ လုပ်ပေးရဦးမှာပါ။ ဒီလောက်ဆို Cities XLက တကယ့်မြို့တွေနဲ့ ဘယ်လောက်တူလဲဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။ Cities XL 2011ထက် မြို့အသစ်တွေ ပါလာမယ်၊ game tools အသစ်တွေ ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Cities XL 2011ထက် ပိုဆော့လို့ ကောင်းလာပါတယ်။ မြို့ 15 မြို့နဲ့ အဆောက်အဦးအသစ် 300ကျော်ကို တကယ့် သဘာ၀နဲ့ ပိုတူလာအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေအားလုံးက ကစားတဲ့သူရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ မြို့တည်ဆောက်ပုံတွေပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက မြို့လေးအတိုင်း တည်ဆောက်ပေးနိုင်မယ့် Cities XL ဂိမ်းက PC versionဘဲ ထွက်တယ်။ တခြား platform တွေမှာတော့ ဆော့လို့ မရနိုင်ဘူး။ အကောင်းဆုံးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မြို့လေး တစ်မြို့ ဘယ်လို တည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာ သိရအောင် Cities XL 2012 ဂိမ်းကို ကစားကြည့်လိုက်ပါ။
အမည်ရင်းမှာ အောင်သက်ပိုင်ဖြစ်ပြီး Myanmar ICTတွင် Game Review, How To များကို ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။	View all posts by Yahtar →
Cities XL 2012, Game
Newer အလင်းရောင်အားနည်းတဲ့ နေရာမှာ အကောင်းမွန်ဆုံး ရိုက်ကူးနိုင်မည့် Canon EOS 1100D
Older ‘‘ဂျင်း’’ မဟုတ်သော ‘‘ဂျင်း’’ (အပိုင်း ၂)
Gamer တွေ အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Sony ရဲ့ PS5
Posted by	 tinmaunghtoo
ICT ရဲ့ Gamer တွေ အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Sony ရဲ့ PS5 ဂိမ်းစက်ထွက်လာတ...
DotA2– Three Spirits Update
Posted by	 Nay Aung Latt
Genre - MOBA Steam Client ဖြင့် Online ချိပ်ဆက်ကစားနိုင်သည့် Dota2၏ နောက်ဆုံးထွက် update များပါဝင်သည့် Three Spirits Update Client...
Secret Files – Sam Peters
Genre - Adventure, Puzzle Adventure နှင့် puzzle ရောစပ်ထားတဲ့ Secret Files ဂိမ်းစီးရီးရဲ့ နောက်ဆုံးဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ ဂိမ်းသစ်ဖြစ်ပြီ...
FIFA Manager 14 Legacy Edition
Genre - Simulation EA ရဲ့ နာမည်ကြီး Football Manager ဂိမ်းဖြစ်တဲ့ FIFA Manager 14 Legacy Edition ဖြစ်ပြီး FIFA ဂိမ်းတွေရဲ့ ထုံးစံအတိ...
Call of Duty – Ghosts
Genre - First Person Shooter CoD - Ghosts ဂိမ်းသစ်ကို Modern Warfare ဂိမ်းတွေရဲ့ Developer ဖြစ်တဲ့ Infinity Ward ကရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်...
Genre - Platforming, Adventure Arcade Action ဂိမ်းအဖြစ်ခေတ်စားခဲ့တဲ့ Classics ဂိမ်း Pac-Man မှဇာတ်ကောင် Pac-Man ပါဝင်ထားတဲ့ 3D စွန့်...
Splinter Cell – Blacklist
Genre - Third Person Shooter / Stealth နာမည်ကြီး Splinter Cell - Convictionရဲ့ တိုက်ရိုက်အဆက်ဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ Fou...
Warner Brosရဲ့ ရုပ်ရှင်ရော ဂိမ်းအဖြစ်ပါ အောင်မြင်တဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Batman : Arkham Origins ဂိမ်းကို October 25, 2013 မှာ Release...
Play Store သုံးလို့ရအောင် ပြုလုပ်နည်း
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Google Play Store သုံးလို့ရတာ သိပ်မကြာသေးဘူးပေါ့ဗျာ။ သုံးတဲ့ လူတွေလည်းများပါတယ်။ ကြိုက်လဲကြိုက်ကြပါတယ်။ Play Store ဆ...
ဖုန်းအ၀င် Callတွေ ၀င်တဲ့အခါ မိမိဖုန်းထဲမှာ Vedio Fileတွေနဲ့ အ၀င် Callတွေကို ဖော်ပြပေးမယ့် Apk တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Apkက မိမိဖုန်းထဲမှာ ...
R.I.P.D THE GAME
R.I.P.D THE GAMEဆိုတာ Action အမျိုးအစား ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ July 24, 2013 ရက်နေ့က ထွက်ထားဖြစ်ပေမယ့် ဒီမှာတော့ Update ဖြစ်နေတုန်းပဲ ရှ...
Softwareတွေကို သုံးချင်တဲ့အချိန် ပြန်သုံးနိုင်အောင်
ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာ အသုံးပြုတဲ့ Software တစ်ခုဟာ ကိုယ့်အတွက် အလွန်အသုံး၀င်နေတယ်၊ မရှိမဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ Software တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်...